We She Me: World Trade Towers အမှတ်တရ
| FLAGS: Delivery Diary , Me , she , Travel
Htoo Tay Zar - 7/14/08, 12:32 AM
အကို ရေ အမှတ်တရတွေ အားလုံးသိမ်းထားတာပဲလား အားကျတယ် ကျွန်တော့်မှာ သိမ်းစာရာ ၃ ခုလောက်တောင် အိမ်ကမတွေ့အောင် ဘယ်နားသိမ်းရမှန်းမသိလို့ အပြင်သွားတိုင်း အိတ်ထဲထည့်သွားနေရတယ် =)
ဇနိ - 7/14/08, 12:40 AM
ဘယ်ကနေ ဘယ်လို `လို့´ - ဆိုလို့ ပြောရဦးမယ်
ကျနော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က “လို့”နောက်က“တဲ့” တောင်ပါသေးတယ်
- ကျနော်တို့လည်း အမှတ်တရ စာထုပ်ကြီးက နောက်ဆုံး ဘယ်ထားရမှန်းမသိလို့ အမေရေ သိမ်းထားပေးပါဦးဆိုပြီး အမေ့ဆီပဲ အပ်ထားခဲ့ရတာ။
အမေဖတ်ရင်တော့ ငါ့သားက အတော် စာရေးတတ်တာပဲ ချီးကျူးမလားမသိဗျ။
May Moe - 7/14/08, 12:54 AM
ဟဲဟဲ ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲထင်နေတာ ။ ဒါတွေက တကယ်.အမှတ်တယ တွေပဲ လေ ။ ဟိုးအရင် အိမ်ကမသိခင် က တေဇာ လိုပဲသွားလေရာ ယူသွားရတယ် ။ :P
Anonymous - 7/14/08, 1:24 AM
a hi..mr.we tot ka tot paing tha kwar..mrs.we ko di lo poe khae tar koe :P it is nice...
imaginary clouds no2- 7/14/08, 1:40 AM
ဟေ့လူ အန်ဒီ ။ ဘယ်က ရှော်ရမှာလဲ ။ မလေးကို ချစ်တယ်လို့ ။။ ကျနော်နောက်ပိုစ်တွေဘာတွေမှာ ခေါင်းစဉ်ပေးခြင်ရင် ပေးလို့ရအောင်တခါတည်းခွင့်ပါတောင်းသွားတယ်။ ပိုင်ပါ့ ကိုယ့်ဆရာ
Kay - 7/14/08, 3:11 AM
ThuHninSee - 7/14/08, 10:23 AM
sawphonelu - 7/14/08, 11:29 AM
မိုက် တယ် ကွာ ။ ရည်းစားစကား ပြော တဲ့ အခန်း ။ ကိုယ့် လို ပါ ပဲ လား အန်ဒီ ရေ ။ ပြော မ ပြ ဘူး ။
nu-san - 7/14/08, 11:32 PM
ပို့စ်စကဒ်လေးတွေ အမှတ်တရလေးတွေကို ကလေးလေးတွေ ကြီးလာရင် ပြန်ပြလို့ရတာပေါ့နော်.. အဟီး.. ဖတ်ရတာ ပျော်စရာကြီး.. ၇ နှစ်ကလည်း ခဏလေးလိုပဲလို့ မထင်ဘူးလားဟင်... အမဆီမှာတော့ ဘာမှ မရှိဘူး Andy တို့ရေ.. ။ ကို?? က စာရေးသိပ်ပျင်းတာ... :D
Andy Myint - 7/15/08, 12:08 PM
ကိုယ်နဲ့ မကွာ ဆောင်သွားတယ်ပေါ့ ထူးတေဇာ
ဟားဟား ကျွန်တော်က ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြောင်လှပြီ ထင်နေတာ.. “တဲ့” ထည့်ပြောတဲ့သူ ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ မဆိုးလှပါဘူး ကိုဇနိရာ
မေမိုးကလည်း ကိုယ်နဲ့ မကွာ ဆောင်သွားတာကိုး
ဒါအကင်းပဲ ရှိသေးတယ် စာဖတ်သူ။ တခြား အဖြစ်တွေလည်း ရှိသေးတယ်။
ရေးဗျာ မောင်တိန်။ ခင်ဗျား တယောသံလောက်တော့ မချွဲသေးပါဘူး
ဒီလိုတော့ ဘယ်တရားမလဲ ကိုစောရဲ့။ စာရေးဆရာမ မဒမ်စောကို ကိုစောက ဘယ်လိုများ ရည်းစားစကားပြောခဲ့လဲ ဆိုတာကိုတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပဲ
ဟုတ်တယ် မနုစံ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၇နှစ်က တကယ်ကို မနှစ်တနှစ်ကလိုပဲ။ ကို-- ကြီးက စာမရေးပင်မယ့် ချစ်တတ်တာပဲ
War War - 7/15/08, 10:38 PM
Very romantic pe` kwar.. mite tal :)
Anonymous - 7/16/08, 12:12 AM
ဒီလိုအမှတ်တရတွေ ရေးထားတာ ဖတ်ရင်း ကြည်နူးမိ ။
ရည်းစားစကားပြောတာလဲ မရဲတရဲ ဆိုပါလား ခွိခွိ ။
pandora - 7/16/08, 1:54 AM
မခံချင်အောင် လုပ်နေကြပြန်ပြီ။ တို့လည်း အားကျမခံ ရေးလိုက်ရ .. ဟင်း။
သက်ဝေ - 7/16/08, 3:27 PM
အမြဲရောက်ပြီး ပိုစ့်တွေ အကုန်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။
Comment တွေသာ အမြဲမရေးဖြစ်တာပါ။
မရဲတရဲနဲ့ပြောဖြစ်ကြသော စကားလေးတစ်ခွန်း အကြောင်းကို အားကျမခံ ရေးချင်နေသူများအား တွန်းအားလေး များများပေးစေလိုပါတယ်...
Andy Myint - 7/20/08, 5:37 PM
Thanks War War. BTW your wedding photos are fantastic and romantic too.
ဟုတ်တယ် ဂျစ်ရယ်။ ဒီလိုပဲ ကြောက်ဒူးတွေတုန် အသံတွေတုန်။ ကျက်ထားတာတွေ မေ့နဲ့။ ဟားဟား
အကျောမပေးနဲ့ မပန် ပြန်ရေး...ဟီးဟီး
စိုးထက် - Soe Htet ! - 7/22/08, 9:13 AM
ဟိ ... မိုက်တယ် ရင်ခုန်စရာလေးတွေ ... :P